बालेनले काठमाडौँ महानगरको कुन कुन वडाबाट कति मत पाए ? « Nagarik Khabar
बालेनले काठमाडौँ महानगरको कुन कुन वडाबाट कति मत पाए ?
प्रकाशित मिति : 25 May, 2022 12:01 pm
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहको जित सुनिश्चित भएको छ । निकटतम् प्रतिस्पर्धिसँग गन्न बाँकी मतभन्दा बढीको अन्तरले अघि बढेपछि उनको जित सुनिश्चित भएको हो ।
काठमाडौँ महानगरमा गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाख ९१ हजार १२५ मत खसेको थियो । खसेको मतमध्ये हालसम्म १ लाख ७१ हजार ८०२ मत गणना भइसकेको छ । अब गणना गर्न १९ हजार ३२३ मत बाँकी रहेको छ ।
१९ हजार ३२३ मतगणना गर्न बाँकी रहँदा बालेनले हालसम्म ५५ हजार ७४७ मत प्राप्त गरेका छन् । उनको निकटतम् प्रतिस्पर्धि नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना श्रेष्ठले ३५ हजार ३७१ मत प्राप्त गरेकी छन् । सिर्जनाकोभन्दा बालेन २० हजार ३७६ मतले अघि रहेका छन् । गणना गर्न बाँकी मतभन्दा बालेन र सिर्जनाबीचको मतान्तर बढी रहेको छ, जसले गर्दा बालेनको जित सुनिश्चित भएको हो ।
बालेनले सदर भएकोमध्ये वडा नम्बर ९ (गौशाला) बाट ४४ प्रतिशत (३ हजार ३१८), वडा नम्बर ३१ (शान्तिनगर)बाट ३८ प्रतिशत (४ हजार १५८), वडा नम्बर ४ (बालुवाटार)बाट ४२ प्रतिशत (३ हजार ९६६), वडा नम्बर ७ (मित्रपार्क) बाट ४१ प्रतिशत (३ हजार ८४६) र वडा नम्बर १० (बानेश्वर)बाट ३८ प्रतिशत (२ हजार ७२८) मत प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै, बालेनले सदरमतमध्ये वडा नम्बर १ (नक्साल)बाट ३४ प्रतिशत (७८३), वडा नम्बर २ (लाजिम्पाट)बाट ३६ प्रतिशत (१ हजार २१५), वडा नम्बर ३ (महाराजगञ्ज) बाट ३७ प्रतिशत (२ हजार ३२६), वडा नम्बर ५ (हाँडिगाउँ)बाट ३७ प्रतिशत (१ हजार ५०१), वडा नम्बर ६ (बौद्ध)बाट ३६ प्रतिशत (३ हजार ४७६) र वडा नम्बर ८ (पशुपति)बाट ३५ प्रतिशत (१ हजार ३१३) मत प्राप्त गरेका छन् ।